Eli ligumbi lokuhlambela, eliNdlu lakho liNdlu yangasese nje-Iindlela ezintsha zoyilo lwegumbi lokuhlambela ngo-2021
Ikhaya / Blog / Eli ligumbi lokuhlambela, eliNdlu lakho liNdlu yangasese-Iindlela ezintsha zoYilo lwegumbi lokuhlambela ngo-2021
2021 / 04 / 05 uhleloBlog 1729 0
Indawo yokuqala ye-selfie yindawo yokuhlambela, kutheni abantu bethanda ukuthatha i-selfies kwigumbi lokuhlambela?
Ngokukodwa kwiivenkile ezinkulu nakwiindawo zokuhlambela ihotele.
Ukudubula okuqhelekileyo esipilini lixabiso eliphezulu.
Ngeli xesha abanye abantu bayazibuza.
Kutheni kwigumbi labo lokuhlambela lingenakho ukudubula?
Kungenxa yokuba ikhaya lakho alikhangeleki lihle
Umkhwa omtsha woyilo lwempilo kwi2019.
Oku kugxila kuyilo ngononophelo, kuthathelwa ingqalelo ukuba ikhaya lakho linakho nokuba negumbi lokuhlambela elihle!
Vuka ebhedini kusasa, kwaye ufuna ukuya kwindlu yangasese, ubaleke uye kwigumbi lokuhlambela kodwa ufumane usapho luhlamba ngaphakathi, ukhe waqubisana nale meko? Ngapha koko, sinokubeka isinki ngaphandle kwegumbi lokuhlambela kwaye siyeke indlu yangasese kunye neshawa ngaphakathi. Oku akuyi kuphucula kuphela ukusebenza kakuhle kunye nokwandisa iimfuno zobomi, kodwa kuya kwenza igumbi lokuhlambela libe semgangathweni.
Ukuhambisa isinki ngaphandle kukongeza udonga kunye nomnyango phakathi kwendlu yangasese kunye nesinki ukwahlula iindawo ezimanzi nezomileyo, kwaye indawo yangasese kunye neshawari nazo zinokwahlulwa kumanzi kwaye zome kwakhona.
Isinki eyahlukileyo ngaphandle ilungele ngakumbi usapho ukuba luhlambe kusasa nangokuhlwa, ukuze bangangxami ukusebenzisa igumbi lokuhlambela yonke imihla.
Olu luyilo aluphazamisi ekusetyenzisweni nakwindlu yangasese kunye nakwishawa, kodwa kukwaqinisekisa ukuba iibrashi zamazinyo, iitawuli kunye nezinye izinto zabucala azingcoliswanga ziibhaktheriya zangasese.
Uyilo olubekwe eludongeni
Kubomi bemihla ngemihla, izindlu zangasese ezisemgangathweni, iikhabhathi zangasese zomgangatho ziqhelekile. Kodwa njengoko imigangatho yokuphila yabantu iphucuka, uyilo lwegumbi lokuhlambela, ngakumbi nangakumbi ingqalelo kwiinkcukacha, kodwa ngakumbi nangakumbi nangakumbi kumgangatho. Izindlu zangasese ezixhonywe eludongeni, iisinki ezixhonywe eludongeni, iikhabhathi ezibhadwe ngodonga nazo ziqwalaselwe ngakumbi nangakumbi. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yoyilo olwahlukileyo, kodwa nangenxa yokuba olu luyilo lulungele ngakumbi iimfuno zobomi babantu.
Indawo yangasese + yendawo yokugcina indawo yokuhlamba
Abantu abaninzi bayakhalaza, igumbi lokuhlambela lincinci, kunye neekhabhathi zokugcina, hayi indlela edakisa ngayo!
Ngapha koko, okoko nje Sebenzisa udonga olusemva kwendlu yangasese kunye nendawo yokuhlamba esinokugcina kuyo izinto ezininzi, nokuba yi-0.5㎡ kuphela, inokuyilwa ngokulula.
Itanki yamanzi yangasese efakwe eludongeni efihliweyo ngokuthe ngqo ngaphezulu kwekhabhinethi yokuhlambela, kwaye uvakalelo ngokubanzi lomelele.
Uyilo lwendlu yangasese enodonga ilunge kakhulu kwaye inokongeza umnxeba wobomi kwigumbi lokuhlambela elincinci.
Ukuba igumbi lokuhlambela linokukhanya okuphezulu kuphela, kuya kubangela ukukhanya okungalinganiyo, iindawo ezimnyama zasekuhlaleni, igumbi lokuhlambela elincinci lincinci liza kujongeka lincinci. Ke kufuneka usebenze kwezi ndawo zintathu.
Indawo engaphambili yesipili: yongeza isibuko sangaphambili sokukhanya ukwenza umthombo wokukhanya ubethe ubuso bakho ngokulinganayo.
Apha ngezantsi kwekhabhinethi yesipili apho kubekwa khona izinto zokuhlamba: Ukuba uziva umnyama, unokuyila umtya wokukhanya oncedisayo.
Ngaphezulu kwendlu yangasese: Ukuba unomkhwa wokufunda xa usebenzisa indlu yangasese, kuyacetyiswa ukuba uyile isibane esongezelelweyo sokufunda ngaphezulu kwendlu yangasese.
Isikhumbuzi: Igumbi lokuhlambela kufakelo lwezibane kunye nezibane kufuneka zikhethe ubungqina bokufuma, hleze ingaphakathi lezibane kunye nezibane zibonakale zinenkungu yamanzi, zinciphise ubomi benkonzo.
| Ukuhlamba okufihliweyo |
Ishawa yethu eqhelekileyo yile
Lixesha lokuba uhlaziye ubuhle, ishawa efihliweyo kukuphucula ixabiso lesixhobo.
Umbhobho wokuhambisa amanzi wale shawa ufihliweyo ungcwatyelwe ngaphakathi kudonga lokuhlambela, intloko yeshawari imiswe kwindawo engaphezulu, isibiyeli eludongeni, ayinakuphakanyiswa ngokuthanda, kuphela yintloko yeshawari kunye neswitshi evezwe ngaphandle. Kodwa intloko yeshawari inebhola encinci esebenzayo, esetyenziselwa ukunyenyisa i-engile yamanzi. I-angle ephezulu kunye nezantsi yokuhamba iguquguquka ngakumbi.
Akukho mibhobho iveziweyo, ibonakala ibonakala ilula kwaye intle, kwaye ayithathi ndawo. Iindaba ezilungileyo kwigumbi lokuhlambela elincinci.
Ngaphambili :: Umbala oPhucukileyo ngolu hlobo, indawo yokuhlambela eyiHip ngokwenene! next: Isitya sokuhlambela ngaphandle sisebenziseka ngokwenene! Kodwa ukuba awunikeli ngqalelo kwezi ngongoma zisi-5, kamva kwingxaki eqhubekayo!